ịgbado ọkụ mbịne ala - China Langzhi ịgbado ọkụ Equipment
ịgbado ọkụ mbịne ala Anyị ịgbado ọkụ mbịne ala maka cylinder ịgbado ọkụ nwere ike ota n'ime onwe-itinye n'ọnọdụ, kemeghi nlereanya na wdg Gụnye isi, mbanye ala, ohu ala, mgbodo na-ebunye na ngwaọrụ na ike mbanye na ngwaọrụ na etc.Transmit ngwaọrụ n'ịwa drive ala, na-akwọ ụgbọala workpiece via esemokwu n'etiti drive ala na workpiece. N'ịmata longitudinal & okirikiri onuete welding.Equiped na akpaka ịgbado ọkụ igwe iji kwalite ịgbado ọkụ quality, inyeaka ọrụ ike, melite productio ...
Anyị ịgbado ọkụ mbịne ala maka cylinder ịgbado ọkụ nwere ike ota n'ime onwe-itinye n'ọnọdụ, kemeghi nlereanya na wdg Gụnye isi, mbanye ala, ohu ala, mgbodo na-ebunye na ngwaọrụ na ike mbanye na ngwaọrụ na etc.Transmit ngwaọrụ n'ịwa drive ala, na-akwọ ụgbọala workpiece via esemokwu n'etiti drive ala na workpiece. N'ịmata longitudinal & okirikiri onuete welding.Equiped na akpaka ịgbado ọkụ igwe iji kwalite ịgbado ọkụ quality, inyeaka ọrụ ike, melite mmepụta efficient.Cooperating na ntuziaka welder, ọ na-arụ ọrụ nke ule na nzukọ.
Self-itinye n'ọnọdụ na-etinyere ka ịgbado ọkụ nke cylinder. Anya n'etiti rollers nwere onwe-gbanwee .Adjusted ịgbado ọkụ gbanwere rollercan-ota n'ime akwụkwọ ntuziaka ụzọ-ịghasa mgbanwe ụdị, ntuziaka bolt mgbanwe na moto slide ụdị. Anya n'etiti rollers nwere ike ịbụ justable baesd na dayameta nke cylinder. Ibu Ibu ibu mgbanwe site 5T ka 200T.Welding n'obosara mgbanwe site 250mm ka
8000mm, hazie dị.
Previous: Obere longitudinal girth ịgbado ọkụ na ngwá
Osote: ịgbado ọkụ rotator
Weld agbanye apụta